ကွန်ပျူတာအရံပစ္စည်းများ - MEETION
သင်အဘို့အညာဘက်အရပျ၌ပါပဲ ကွန်ပျူတာအရံပစ္စည်းများ.ယခုအချိန်တွင်သင်ရှာဖွေထားပြီးမည်သည့်အရာကိုမဆိုသင်တွေ့ရှိရန်သေချာသည် MEETION.ကျနော်တို့ကဒီမှာပေါ်မှာကြောင်းအာမခံပါသည် MEETION.
အဆိုပါထုတ်ကုန်က၎င်း၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပစ္စည်းများအားလုံးသည်အရည်အသွေးမြင့်မားစေရန် FDA / UL / CE ကိုအတည်ပြုပါသည်။.
ရေစိုခံ Backlit Gaming Keyboard K9320
item no ။ : MT-K9320အမှတ်တံဆိပ်: Meetionအရောင်: အနက်ရောင်ရရှိနိုင်: စတော့ရှယ်ယာEan: 69703447311974ဖော်ပြချက်: Rainbow Backlit ချိန်ညှိခြင်းအရောင်နှင့်အတူ backlit; ပ conflict ိပက္ခမရှိဘဲသော့မျိုးစုံ; ရေစိုခံဒီဇိုင်း